Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: 'တလိမ်နှစ်လိမ် ... စိန် ... လူလိမ်'
by Qing Minya
'တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်' ဟူသော စကားကို လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွား နေသော ဆူပူအုံကြွမှုများနှင့် ဆီလျော်အောင် 'ရခိုင်အိမ်မီးလောင် ရုိုဟင်ဂျာ လက်ခမောင်းခတ်' ဟူ၍သာ ပြင်လိုက်ချင်ပါသည်။
မည်သို့ သော ရိုဟင်ဂျာများ ဝမ်းသာအားရ အူလှိုက်သည်းလှိုက် ရယ်နေကြမည်နည်း။ ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့သွတ်သွင်းရန် ကြိုးစားနေသူများ၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်သော သမိုင်းလိမ် ဖန်တီးရှင် ရိုဟင်ဂျာဘလော့ဂါများပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ အနက် ရှင်မင်းယာတို့မြန်မာနိုင်ငံသား ဖေ့ဘုတ် သုံးသူများအကြားတွင် အထူးထင်ရှားသော၊ ယခုလက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အရေးအခင်းများတွင် ရိုဟင်ဂျာတွေ အသတ်ခံနေရပါသည်ဟု အားမနာ လျှာမကျိုး မျက်နှာပြောင်တိုက်ကာ လိမ်လည်ငိုယိုနေသူကား ရိုဟင်ဂျာဘလော့ဂါ ဦးဘစိန်ပင် ဖြစ်သည်။ ဦးဘစိန်သည် ဘူးသီးတောင် မောင်တောဇာတိ၊ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သည်။ RSO ဟု အမည်တွင်သော Al Qaeda နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် Rohingya Solidarity Organization အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက အလားတူ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော Arakan Rohingya National Organization ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော Nurul Islam နူးရ်အစ္စလာမ်၊ British Rohingya Oraginzation UK (BROUK) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဦးထွန်းခင်တို့ နှင့် မပြတ် အဆက်အသွယ် ရှိသည်။
ARNO မှ နူးရ်အစ္စလာမ်ကို အချို့သော မြန်မာများ သတိထားမိပေလိမ့်မည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ OIC, Organizarion of Islamic Conference တွင် Democratic Voice of Burma (DVB) ၏ ဥက္ကဠ ဦးဟန်ယောင်ဝေဖြင့် အတူပူးတွဲ တွေ့ မြင်ရသူ ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်မှ စ၍ DVB သည် ရိုဟင်ဂျာများကို အင်တိုက်အားတိုက် ပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီး နီးစပ်ရာ အသိုင်းအဝန်းမှ ဦးဟန်ယောင်ဝေသည် OIC တွင် နူးရ်အစ္စလာမ်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ အခကြေးငွေယူကာ ရိုဟင်ဂျာများကို ပွဲထုတ်ပါမည်ဟု သဘောတူညီမှု ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် တဖက်မှ BROUK မှလည်း Burma Campaign UK (BCUK) နှင့် BBC တို့ ၏ အကူအညီဖြင့် အင်တိုက်အားတိုက် ရိုဟင်ဂျာများအတွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ သတင်းဋ္ဌာနတွင် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ပတ်သက်သော သမိုင်းလိမ်များကို ဖြန့် ဝေခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် DVB ဦးဟန်ယောင်ဝေနှင့် ARNO မှ နူးရ်အစ္စလာမ်တို့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ပံ့ပိုးပေးရန် သဘောတူညီမှု ရရှိသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် BBC Anna Jones ၏ ဆောင်းပါးပါ ဓါတ်ပုံဝယ် ရခိုင်ပြည်သူများ နေရာတွင် ဘင်ဂလီကလးငယ်ပုံ ဖော်ပြရာမှ အစပြု၍ ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံတကာမှ ပိုမိုသတိထားမိလာသည်။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တွင် ဝေနှင်းပွင့်သုန် အပါအဝင် အင်္ဂလန်ရှိ မြန်မာမူစလင်အချို့ ရိုဟင်ဂျာများကိုယ်စား ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တဆက်တည်းမှာပင် ဦးဘစိန်ဦးစီးသော Rohingya Blogger မှ တစိုက်မှတ်မှတ် ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်သော သမိုင်းအလိမ်များ၊ ရိုဟင်ဂျာများ ဖိနှိပ်ခံနေရပါသည်ဟူသော ဆောင်းပါးများ၊ ပို့ စ်များကို မြန်မာများ တည်ထောင်သော တည်ထောင်ထားသော ဂရုများတွင်သာမက နိုင်ငံတကာမှ ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲသူများ တည်ထောင်ထားသော ဂရုများတွင်ပါ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝါဒဖြန့် လာပါသည်။ အဆိုးဆုံးလုပ်ရပ်တစ်ခုမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း စက်လှေနစ်မြှုပ်မှုဘေးမှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ရေတပ်၏ ကယ်ဆယ်ခြင်းကို ခံရသော ဘင်ဂလီများ အိပ်မောကျနေသည့်ပုံအား မောင်တောမြို့နယ်တွင် ရခိုင်များ သတ်၍ သေဆုံးသွားသော ရိုဟင်ဂျာများဟူ၍ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပို့ စ်တင်ကာ လိမ်လည်ခဲ့သည်။
မူရင်းဓါတ်ပုံကို ကြည့်ရန် လင့်ခ် - http://newshopper.sulekha.com/indonesia-myanmar-ships-of-misery_photo_649883.htm
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာများကို ကြိုးကိုင်သူ ARNO မှ နူးရ်အစ္စလာမ်၊ BROUK မှ ဦးထွန်းခင်နှင့် Rohingya Blogger မှ ဦးဘစိန်တို့ ၏ တခါက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပုံကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
စာရှုသူမိတ်ဆွေများအား မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။ ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ရင်း၍ စီးပွားရှာသော ဤလူယုတ်မာများကို ဝိုင်းဝန်းကန့် ကွက်ကြပါစို့ ။အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ပတ်သက်၍ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံလိမ်ညာသော သတင်းများ ဖြန့် ဝေသူ ဦးဘစိန်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ဘလော့ဂါအကြောင်းကို မြန်မာပြည်သူများ သိရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတကာမှ သိရှိစေရန် တတ်စွမ်းသမျှ သတင်းလက်ဆင့် ကမ်းကြပါစို့ ။
(ရှင်မင်းယာသည် ယခု စာစုတွင် ဖော်ြ­ပထားသော ဦးဘစိန်၊ ဦးထွန်းခင်၊ နူးရ်အစ္စလာမ်တို့ နှင့် မည်သည့် ရန်ြ­ငိုးရန်စမျှ မရှိပါ။ သို့ ပါသော်လည်း ယခု လက်ရှိ ရခိုင်ြ­ပည်နယ်တွင်ြ­ဖစ်ပွား နေသော အရေးအခင်းများဝယ် ရခိုင်မိဘြ­ပည်သူများ ခံစားနေရသော ဒုက္ခများကိုြ­မင်တွေ့ ရလေသောအခါ ရှင်မင်းယာ၏ ရင်တွင်းဝယ် ရိုဟင်ဂျာများကို ပံ့ပိုးကူညီသူများကို မကျေနပ်ြ­ခင်း ကြီးစွာြ­ဖစ်မိပါသည်။ မိမိ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရခိုင်ြ­ပည်သြူ­ပည်သားတို့ ၏ ကံကြမ္မာကို ဥပက္ခာြ­ပုရက်သော ဤလူတို့ တွင် နှလုံးသားမှ ရှိပါလေစ။ ထို့ြ­ပင် သူတို့ ၏ စနက်ကြောင့်ြ­ပည်ပ အြေ­ခ စိုက်မီဒီယာများမှ ရိုဟင်ဂျာများ ဖိနှိပ်ခံနေရပါသည် ဟု တွင်တွင် မုသားဆိုနေကြသည်။ လက်ရှိြ­ဖစ်ရပ်နှင့် လားလားမျှ မသက်ဆိုင်သော ဓါတ်ပုံဟောင်းများကို သုံး၍ ရိုဟင်ဂျာတွေ အသတ်ခံရပါသည် ဟု နိုင်ငံတကာတွင် လိမ်ညာလှည့်ြ­ဖားနေသော သူတို့ ၏ လုပ်ရပ်များကို ရွံ့မုန်းမိပါသည်။ စာရှုသူ ချစ်မိတ်ဆွေများရှင့် ... ရခိုင်မိဘြ­ပည်သူများကို ကူညီသောအနြေ­ဖင့် သတင်းအလိမ်များြ­ဖန့် ဝေနေသော ဤလူယုတ်မာများကို ဝိုင်းဝန်းရီပို့ လုပ်ြ­ခင်ြး­ဖင့် ရခိုင်ြ­ပည်သူ များကို ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါစို့ ။ )
ထွန်းခင် (ရှပ်အြ­ဖူ)၊ နူးရ်အစ္စလာမ်၊ ဘစိန် (ကုတ်အနက်)
OIC မှ ဟန်ယောင်ဝေနှင့် နူးရ်အစ္စလာမ်
Facebook of Rohingya Solidarity Org (RSO)
BROUK's President Khin stagingaprotest for Rohingya in UK
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:44
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: 'တလိမ်နှစ်လိမ် ... စိန် ... လူလိမ်' . All Rights Reserved